Melon mandritra ny fampinono
Sakafo mamy sy siramamy no hita amin'ny ankamaroan'ny fianakaviana ao an-tokantrano. Fa rehefa hita ilay zazakely nandrasana hatry ny ela, dia matetika no tsy maintsy dinihina tsara ny sakafony. Raha ny marina, ny taratasy mivalona mahavariana momba ny zaza dia mbola tsy afaka mandany sy mandany tanteraka ny zavatra sasany amin'ny rononon-dreny. Noho izany, ny fanontaniana raha azo atao ny mihinana melon mandritra ny fampinonoan-dreny dia misokatra ho an'ireo reny izay nankalaza io voankazo io alohan'ny vohoka. Diniho izay lazain'ny manam-pahaizana momba izany.
Moa ve ny melon mahasoa ho an'ny reny mampinono?
Io kolontsaina melon io dia mangetaheta ny hetaheta ary manompo toy ny tonic tena tsara. Na izany aza, ny fampiasana melon mandritra ny fampinono dia afaka miteraka fanafody mahery vaika amin'ny zaza. Ny dokotera dia nanaporofo fa mihabetsaka ny vokatra azo avy amin'izany raha ny reny mihitsy no mahatsapa ny traikefa amin'ny alikajy. Ny fametrahana ny toerany amin'io fanjakana io dia matetika no lova.
Aza adino fa ny melon dia tena tompon-daka amin'ny votoatin'ny sikara, izay heverina ho voan'ny kômôhy haingana. Ny fanafody toy izany dia mety miteraka fanaintainana mafy eo amin'ny vavony mbola tsy voavolavolan'ny zazakely ary miteraka entana sy fitomboan'ny famokarana entona. Noho izany, ireo zaza amam-pahaizana efa za-draharaha, izay liana amin'ny reniny raha toa ka azo atao ny mihinana melon mandritra ny fampinonoan-dreny amin'ny volana voalohany amin'ny fiainan'ny zaza, dia mamaly matetika. Na dia mankalaza izany vokatra voajanahary izany aza ianao, dia tsy tokony hampiasainao mandritra ny telo volana voalohany amin'ny fiainan'ny zanakao.
Rehefa nihalehibe kely ilay zaza ary tsy mahatsikaritra ny fanehoan-kevitra mahazatra amin'ny legioma sy ny voankazo hafa, andramo tsikelikely mba hamerenana ilay melon eo amin'ny menuo. Amin'ity tranga ity dia tsy tokony hialanao tanteraka izany. Melon mitondra sakafo mandritra ny fampinonoan-dreny dia noho ireto antony manaraka ireto:
Io voankazo io dia heverina ho tena zava-tsarobidin'ny vitamin sy microelements. Ho lasa mpanampy azo antoka izy amin'ny ady atao amin'ny fo, ny aretina ny lefona sy ny voa, ny gout, ny rheomatisma, ary koa hanamafy ny fiarovana. Ankoatr'izany, melon dia manankarena fibra voajanahary sy karotena, izay mahatonga azy io ho singa tena ilaina amin'ny fitsaboana ny fikorontanana sy ny tsinontsinona tsinay hafa.
Ny hahitana ny ampahany kely amin'ny melon dia tena ilaina amin'ny famoizana, satria manentana ny ronono mavesatra avy amin'ny reniny izany.
Ny vokatra toy izany dia manosika ny fanadiovana tanteraka ny vatana ary mampihena ny asan'ny voa.
Fitsipika momba ny fampiasana melon
Raha misalasala raha mety hihinan-kanina mandritra ny fampinonoana ianao, dia aza manahy: raha manaraka fitsipika vitsivitsy ianao, dia tena azo antoka izany. Voalohany indrindra, manomboka miditra ao amin'ny menio misy ampahany kely, izay azo atao tsara ny mihinana amin'ny maraina. Raha mahatsapa tsara ny zanakao ary tsy mahita fery eo amin'ny hoditra ianao dia tsy miova ny kitapony, fa ny fahasalamany dia tsy miharatsy, ny ampitson'iny dia afaka mitondra ny tenany miaraka amin'ny servisy roa melon ny reniny. Ny ampahany faran'izay azo amboarina amin'ny vokatra amin'ny faran'ny herinandro dia ampahany 3-4.
Aza mihinana melonina eo amin'ny vavony iray foana. Ny renim-pianakaviana, ny marary, ny kolitis, ny aretin'ny fery malemy dia tsara kokoa ny mamoy io voankazo io. Afaka mampitombo ny aretina tena goavin'ny tavoahin'ny gastrointestinal ny melon. Miaraka amin'ny diabeta, ny fampiasana azy dia mifanohitra tanteraka.
Ny fisafidianana melon, ny reny mampinono dia tokony hitandrina tsara. Mahaliana fa ny faritra amin'ny voankazo dia tsy manana poti-basy sy kiraro, izay misy bakteria miteraka aretina. Tsy dia mampidi-doza koa ny mividy milon-doko. Raha mbola mikarakara fivarotana melon iray ianao ary hihaona ireo trangan-javatra mampidi-doza tahaka ny fiterahana, ny aretim-pivalanana, ny fihinanan-kena, - dia makà avy hatrany ny fiomanana amin'ny fikarakarana toy ny charcoal-activé ary miantsoa ambulance.
Fluorographie amin'ny fampinonoana
Femilac ho an'ny vehivavy bevohoka
Fikarakarana fanosihosena mandritra ny fampinono
Azo atao ve ny mampinono ny reniko borsch?
Azo atao ve ny mamelona lasopy sipa mamy?
Ahoana ny fomba hamongorana ny fihenan'ny ronono?
Azo atao ve ny misotro toaka ho an'ny reny mampinono?
Karazana legioma inona no azon'ireo reny mitaiza kely?
Loharano ho an'ny zaridaina - toro-hevitra momba ny fialana amin'ny tazo
Fanipazana latabatra ao amin'ny efitrano fandriana
Marika 25 Jolay
Afobe ho an'ny vehivavy Hugo Boss
Ahoana no fomba hiomanana zrazy?
Ahoana no ahitanao mpanohana?
Famantarana ny Andro Ilin - toetrandro
Fitsaboana kanseran'ny havokavoka miaraka amin'ny fitsaboana amin'ny olona
I Bella Hadid dia lasa iray amin'ireo modelin'i Victoria's Secret